kiimikada Beeraha - Changzhou longxin Makiinado Co., Ltd
kiimikada beeraha waxaa loo isticmaalaa in beeraha si looga hortago oo lagu xakameeyo cudurada iyo cayayaanka iyo sharciyaynta koritaanka dhirta. Waxaa si weyn loo loo isticmaalo beeraha, kaymaha iyo wax soo saarka xannaanada xoolaha, nadaafada deegaanka iyo guriga, iwm
Waxaa jira noocyo badan oo ah kiimikada beeraha, sida uu sheegay isticmaalka waxa loo qaybin karaa sunta cayayaanka, acaricides, rodenticide, nemacides, molluscicides, fungicides, doogga, nidaamiyo koritaanka dhirta.
Sida laga soo xigtay ilo ku of feed, waxaa loo qaybin karaa macdanta, Avv noolaha iyo kiimikada. Oo budeeyey, budada wettable, saliid emulsifiable, cream, Jinka, Colloid, wakiilka fumigation, wakiilka ciiryaamada, granule, walxaha iyo saliid loo qaybin karaa sida ay qaab qiyaasta processing.
Talinaynaa qalabka wax soo saarka cuntada iyo alaabta caafimaadka: taxane caadiga siman gudaha-qaboojinta buuxa dhagax kuusha shaqo, ay tahayna si taxane socodka degdeg ah dhagax ciid, taxane WSS siman iyo dhagax